इलामका टिका मगरलाई ‘हल अफ फेम सिजन २’ को उपाधि ! « MNTVONLINE.COM
काठमाडौँ । एमएनटिभी अष्ट्रेलियाद्वारा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय अनलाईन गायन प्रतियोगीता हल अफ फेम सिजन २ को उपाधि ईलामका टिका मगरले जितेका छन् । शनिबार भएको ग्रान्ड फिनालेमा आफुसँगगका दुई प्रतिस्पर्धीलाई पन्छाउँदै टिका मगर विजेता बनेका हुन् । टिकासँगै ललितपुरका पूर्ण विक र बुटवलका विजय सुनारले फाइनल प्रतिस्पर्धी रहेका थिए । नारायण गोपालको ’तिमिलाई म के भनूँ’ गीतको अडियो क्लिप पठाएर सहभागीता जनाएका टिका मगर टप ५०, टप २७ टप टप ६ र टप ३ हुँदै उपाधि कब्जा गर्न सफल भए । टिकाले सुरुदेखी नै जजको सकरात्मक कमेन्ट पाएका थिए ।
हल अफ फेममा टप ९ ले स्वरसम्राटका अमर गीतहरुलाई यसरी प्रस्तुत गरे (हेर्नुहोस् भिडियो)
हल अफ फेममा आजबाट टप २७ को प्रस्तुति, २३ जना बिदा भए !
‘हल अफ फेम सिजन २’ को चौथो एपिसोडमा ११ जनाले दिए प्रस्तुति (कार्यक्रम हेर्नुस्) !
‘हल अफ फेम’मा झापादेखि चेक रिपब्लिकसम्मका प्रतिस्पर्धी, आज राति सकिँदैछ टप ५० को प्रस्तुति !
आइतबार १ हजार भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, थप ८ जनाको मृत्यु
रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति, साँझ ५ बजे सपथ लिने